घरमा छोरी जन्मेको खुसियालीमा …. - Kohalpur Trends
घरमा छोरी जन्मेको खुसियालीमा ….
काठमाडौँ । लैंगिक विभेद कायम रहेको नेपाल तथा भारत जस्ता देशहरुमा छोरा र छोरीबीच भेदभाव हुन्छ । परम्परागत समाजमा छोरा जन्मिदा खुसी मनाउने र छोरी जन्मिदा दु:खी हुने गर्दछन् मान्छेहरु । तर त्यहीँ परम्परागत सोँचलाई चुनौती दिएका छन् एकजना भारतीय दम्पतीले ।
परिवारमा ३५ वर्षपछि छोरी जन्मिएको खुसीमा उनीहरुले उत्सव नै मनाएका छन् र छोरीलाई घरसम्म ल्याउनका लागि हेलिकप्टर नै चार्टर गरेका छन् ।
भारतको राजस्थानस्थित नागौर जिल्लाको निम्बडी चाँदवता गाउँमा यो घटना भएको हो । स्थानीय ५५ वर्षीय किसान मदन प्रजापतको परिवारमा ३५ वर्षपछि छोरीको जन्म भयो । आफ्ना एक छोरा र एक छोरी रहेको मदन बताउँछन् ।
ठूली छोरी ३५ वर्षकी भैसकेकी छिन् र छोरा २१ वर्षका भए । गत वर्ष बिहे गरेका उनका छोरा हनुमान प्रजापतकी पत्नी चुकी देवीले गत अप्रिल २ मा छोरी जन्माइन् । परिवारमा नातिनी जन्मिएपछि मदन प्रजापतको खुसीको सीमा रहेन ।
ती बालिकाको नाम सिद्धि राखिएको छ । नागौर जिल्ला अस्पतालमा जन्मिएकी छोरीलाई स्थानीय रितिरिवाज अनुसार सुत्केरी चुकी देवीको माइती हरसोल गाउँमा लगियो ।
त्यसपछि मदन प्रजापतले आफ्नी नातिनी तथा साढे ३ दशकपछि परिवारमा जन्मिएकी छोरीको गृह प्रवेशलाई उत्सवको रुपमा मनाउने विचार गरे ।
उनले त्यसको भव्य तयारी गरे । त्यसपछि ती बालिकालाई उनको मावलीघर हरसोलदेखि आफ्नो घर निम्बडीसम्म हेलिकप्टरमा चढाएर ल्याए ।
नातिनीलाई घरमा ल्याउनका लागि हेलिकप्टरको बन्दोबस्त गर्न पनि उनले निकै मेहेनत गरे । अन्ततः रामनवमीको दिन नातिनीलाई १० मिनेटको हेलिकप्टर यात्राबाट घरमा ल्याइयो । घरमा नातिनी ल्याइएसँगै त्यहाँ उपस्थित परिवारजन तथा गाउँलेहरुले फुलमाला तथा परम्परागत गीतसंगीतबाट स्वागत गरे । बीबीसीबाट
Previous Previous post: जनकपुरधाममा बोराभित्र पुरुषको शव भेटियो
Next Next post: युवकको हत्या आरोपमा पत्नी र भाइ पक्राउ